Shanduro dzinotevera dzeLinux Mint dzichava nyore uye dzichinyanya kushanda | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Linux Mint blog yagara iine posvo nyowani senguva dzose pakutanga kwemwedzi wega wega. Kupinda uko Clem akataura pamusoro penyaya dziri kuuya dzeLinux Mint pamwe nekutenda zvipo zvese zvakagamuchirwa kusvika parizvino. Iyi posvo yakatakurwa nenhau uko isingataure zvakananga nezve inotevera vhezheni yeLinux Mint kana Cinnamon, asi nezve nzira iyo iyo kugovera kuchazotevera mukati mezviitiko zvinotevera.
Linux Mint inoratidzirwa nekuve iri nyore kugovera yakanangidzirwa kune wevashandisi mushandisi. Mundima iyi kubudirira uye kunovavarira kuve yakapusa sezvinobvira. Nekudaro, maturusi akati wandei nezvirongwa zvichaita shanduko dzinozoita kuti dzive nemabasa mashoma asi izvo iwo mashoma mashandiro avanoita, ivo vanoita chaizvo mushe.
Mune chikamu ichi, chishandiso chekuchengetedza ichave yekutanga kuita shanduko idzi. Kubva kuLinux Mint 18.3 zvichienda mberi, chishandiso ichi chichava chakareruka, chichava nemashoma maficha, asi izvo zvishoma zvaunoita iwe unozviwana chaizvo. Mune ino kesi, mushure mekugadziriswa, ichazongo chengetedza iyo imba folda inozoitsimbirira mu tar.gz faira. Iyi faira yakadzvanywa inogona kushandiswa kudzoreredza backups. Nezve izvo zvakaiswa mapakeji, izvi zvinomira kuteedzerwa uye chete iwo runyorwa rwezvirongwa zvakaisirwa pachedu zvinoratidzwa kuitira kuti mune yazvino kumisikidza isu tinokwanisa kuiisa zvakare
Maitiro acho mabhairi ndechimwe chezvinhu zvitsva mune inotevera vhezheni yeLinux Mint. Maitiro mabhawa, kungave kunobva kuzvivakwa kana kubva mukuita kwakadai sekunamatira mafaera, zvishoma nezvishoma inozopinzwa muCinnamon, MATE uye paLinux Mint. Zvese zvekutenda nekushandiswa kweLibXApp raibhurari iyo yatove nebasa iri.
Maererano naClem, kufambira mberi uku kuchave kuri muLinux Mint 18.3 uye neshanduro dzemberi dzekuparadzira, inokanganisa zvimwe zvirongwa uye kunyange MATE uye mashandisiro ayo. Izvi zvinogona kutsamwisa vamwe vashandisi sezvo ivo vacharasikirwa nemamwe mabasa asi kune vatsva vashandisi chichava chinhu chekukoshesa. Asi Ndeupi chirongwa chichava chinotevera kuitirwa shanduko idzi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Shanduro dzinotevera dzeLinux Mint dzichava nyore uye dzichishanda
Ndinovimba iyo zvakare yakagadzikana uye inoenderana. Mint Cinnamon ndiyo yanga iri distro yangu yakasarudzika kwemakore maviri apfuura, asi muzhizha rino ndakaneta nematambudziko ndikaisa Ubuntu Mate. Ini handifarire kutaridzika kweMate zvakanyanya seCinnamon, asi yakagadzikana uye maererano nekuenderana Ubuntu anokunda nekukoromora.
Vanhu ava vanoziva zvavanoitira chimwe chinhu, ivo ndivo vakanakisa uye vane simba kune vazhinji vashandisi kuti uku ndiko kubudirira kukuru mukati memari dzisinga fungidzike dzekugadziriswa kwehurdware uko kunotengeswa pasirese pasirese uye mushandisi wega arikushandisa sisitimu futi. . Uye nezvose zvinoshanda. Handina mubvunzo kuti ndivo vakanakisa, vachijekesa kuti handifarire Gtk uye ini handisi mushandisi wavo.
Kali Linux Zvishandiso